Lalàna · Febroary, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Lalàna · Febroary, 2020
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Febroary, 2020
Fanavahana ireo vondrom-piarahamonina anjorom-bàla ao India tsy hahazo torohay natao ho an'ny rehetra
Azia Atsimo14 Febroary 2020
Asongadin' i Subhashish Panigrahi ireo fanamby sy fahafaha-manao mifandraika amin'ny fahafahan'ireo vondron'olona anjorom-bàla ao India hahazo ny torohay natao ho an'ny daholobe.
India, niteraka adihevitra momba ny rafitry ny fitsaràna ny namonoana tsy nandalo fitsaràna ireo efatra voampanga ho nanolana
Azia Atsimo11 Febroary 2020
Marobe no nitehaka ny polisy ao Hyderabad noho ny nakàny ny toeran'ny mpitsara sy mpanapa-doha.
Solombavambahoaka bory tànana, vao voafidy tao Môzambika, hifantoka amin'ny fanabeazana
Afrika Mainty07 Febroary 2020
"Inoako fa ny fisiako ato anatin'ny antenimiera, dia ho afaka handrisika sy ho lasa aingampanahy ho an'olona maro aho amin'ny alàlan'ny zavatra ho ataoko mandritra ny fepotoana hiasàko."
Nosamborina noho ny ‘faniratsirana’ ny finoana Islamo tany Bangladesh ilay mpihira bãul Shariat Sarkar
Azia Atsimo04 Febroary 2020
Voampanga tamin'ny fanehoan-kevitra nandratra ny "fihetseham-po ara-pinoana" ho an'ny Miozolomana ilay mpihira baul Shariat Sarkar. Nilaza izy fa tsy misy porofo mandrara ny mozika amin'ny Islamo.